परमिताले स्विकारिन्, बुढानिलकण्ठ दुर्घटनाको गल्ती « Nepalkala.com
मंसिरको अन्तिम साता बुढानिलकण्ठमा भएको कार दुर्घटनामा नायिका परमिता आर एल राणा पनि रहेको खुलेको छ । उनले घटना घटेको करिब १ महिनापछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफु पनि कारमा रहेको खुलाएकी हुन् । बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले ठक्कर दिदा पैदलयात्रु लिला देवकोटाको निधन भएको थियो ।
अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेका चालक २१ वर्षीय पृथ्वी मल्लले अनियन्त्रित ढंगले कार चलाउँदा देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । कारमा मल्लसहित करिश मास्के, एलिना थापासहित अर्की एक जना युवती रहेको बताइएको थियो । ती युवती नायिका राणा रहेको चर्चा भए पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको थिएन ।
उनले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्, ‘अन्ततः मैले आज डिसेम्बर १४ भएको घटना बारे हिम्मत गरे तपाईहरुलाई के भयो भनेर बताउने निर्णय गरेको छु। पहिले, म माफी चाहान्छु र सबैलाई थाहा दिनुहोस् म कति दुः खी छु। चार व्यक्तिले गरेको मूर्खतापूर्ण निर्णयले एउटा निर्दोष आत्माको जीवन लियो। यद्यपि म इच्छा गर्दछु यो सत्य नै थिएन र यो सबै नराम्रा सपनाहरू थिए, तर म पनि त्यस कार भित्रका यात्रीहरूमध्ये एक थिएँ। यो कुरा स्विकार्न ढिला भएकोमा म साँचो माफी माग्दछु किनकी म अझै धेरै चोट र्पुयाएको छु र दुर्भाग्यपूर्ण घटनाबाट स्तब्ध छु। चार छोरीकी एउटी आमाले उनीहरूको मायालु आमा गुमाइन् र श्रीमान्ले सहयोगी श्रीमती गुमाए यस घटना पछि मेरो जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। केवल भगवानले जान्नुहुन्छ कि म हरेक बिहान मेरो हृदय र आत्मासँग कसरी उठ्छु र अझै शोक र शोकमा छु। म फेरि कहिल्यै उही मान्छे हुनेछैन। म जनताको भावना र उनीहरूको पीडित र परिवारका लागि समानुभूतिका साथ एकतामा उभिएको छु। म चाहन्छु कि मैले यो चाँडै महसुस गरिसकेको छु कि मद्यपान गर्नु कहिले पनि एक विकल्प होइन तर यो केवल आफैंलाई होइन तर सबैलाई जो प्रभावित हुन सक्छ जोगाउने जिम्मेवारी हो। जब म यो धेरै भारी हृदयले लेख्छु, यसले मलाई मेरो जीवनको प्रत्येक क्षण मार्छ कि एक निर्दोष जीवन हराएको छ। म सदाको लागि यो वेदनाको साथ बाँच्नेछु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिनेका लागि म जान्दछु कि मँ पनि कहिले उडदैनौं। म विश्वासमा हुर्कें कि दया संसारमा सब भन्दा ठूलो चीज हो। तपाईं कसैलाई थाहा नहुन सक्छ कि मैले मेरो बुबालाई कार दुर्घटनामा हराएँ जब म केवल दुई वर्षको थिएँ, म मेरो पीडा, क्रोध र शोकका साथ बाँचिरहेको छु किनभने उहाँ मेरो दैनिक जीवनमा हुनुहुन्नथ्यो। म एक हुँ जो एकल आमाले हुर्काएको थिएँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि परिवारको सदस्यको पीडा मेरो छेउमा हुनुहुन्न। म मेरो सम्पूर्ण जीवनमा बुबाको लागि रून्छु र तृष्णा गर्छु। बलियो हुनु मेरो लागि कहिल्यै विकल्प थिएन किनभने मेरी आमाले उनको सक्दो राम्रो काम गर्नु भएको देख्नुभयो र मेरो परिवारको लागि कडा परिश्रम गरिरहनु भएको बाल्यकालदेखि नै म पनि ठूलो भएपछि म पनि उहाँजस्तै हुनुपर्दछ भन्ने लाग्थ्यो। मैले जीवनभर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन्ने प्रयास गरेको छु। तर दिनको अन्त्यमा म केवल एक मानिस हुँ मेरो समाजमा मेरो स्थिति जस्तोसुकै हो र म पनि डराउँछु। म मेरो सम्पूर्ण हृदय र प्राणबाट यो इच्छा गर्दछु कि म यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई फिर्ता लिन सक्दछु। उनी कोही पनि हुन सक्छिन्, मेरो प्रियजन वा म आफैं हुन् र यसले मलाई दिनहुँ सताउन थाल्छ कि मैले उसलाई ड्राइभर वा ट्याक्सीमा बोलाउन सक्छु र प्रभावमा सवारी चलाउनु हुँदैन, बरु मैले भोग्नु परेको नतिजाको बारेमा सोचे बिना। गाह्रो तरीका सिक्न। म क्रोधलाई घृणा गर्दछु र मलाई घृणा गरिएको सार्वजनिक रूपमा म बुझ्छु। तर मैले यो पनि बुझेको छु कि म पनि हामी सबै जस्तो मानिस हुँ। र म यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दछु कि मैले गम्भीर गल्ती गरेको छ जसले मलाई सँधै सताउनेछ। तर एक अर्कालाई दोष लगाउँदा मृतक र उनको परिवारका लागि न्याय हुँदैन। हो म डराएँ र यो घटना घट्दा म पूर्ण रूपमा जमेको छु, मलाई के गर्ने भनेर पनि थाहा थिएन। मेरो दिमाग पूर्ण रूपमा सुन्न थियो र मेरो कान बज्दै थियो। म अझै गाडीको अनुहारमा छक्क परेको, स्थिर र आघात भएको थियो, जबकि मेरो साथीले हंगामा गरेको दृश्य देखेर कारबाट बाहिर निस्केको थियो। जब उहाँ फर्कनुभयो उनले मेरो राज्य देखे, मेरो हात समातेर मलाई कारबाट बाहिर निकाले र चिच्याए ‘छोडिनुहोस्, मात्र छोड्नुहोस’ म यत्ति छक्क परें कि म बाहिर आउँदा पनि म कारको छेउमा बसिरहेको थिएँ के गर्ने थाहा थिएन। मलाई थाहा थिएन कि एउटी आइमाईलाई चोट लागेको थियो। त्यसपछि मैले हूल गाडीको बाहिर देखें, सडक पार गरें किनकि मेरो मुटु भयले भरिएको थियो। मैले झोला खोलेर तुरुन्तै मेरो फोन रिचार्ज गरें। मैले बोलाएको पहिलो व्यक्ति जिम्मेवार अभिभावक थिए किनभने म त्यतिखेर मेरी आमालाई बोलाउन पनि डराउँथें। कसैले पनि मेरो कलको जवाफ दिएनन् त्यसैले म त्यहाँ पसलमा बसिरहेको छु के गर्ने थाहा छैन। मेरो दिमाग पूर्ण रूपमा खाली र आघात मा थियो। केही स्थानीयहरू म कहाँ आए र म त्यहाँ कार भित्र थिए भने सोधे म हो भने म कारमा थिएँ। म दुर्घटना भएको ठाउँमा सडक भएर म नतिजा सामना गर्न तयार थिएँ। म आँसु थाम्न थाल्छु त्यस समयमा के गर्ने भनेर थाहा छैन। त्यो क्षणमा एक बाइकमा एक स्थानीय मानिस मकहाँ आए र भने कि यो त्यहाँ रहनु मेरो लागि सुरक्षित छैन। उनले मलाई भने कि केहि हुन सक्छ। त्यो क्षणमा म डराएँ। मैले सोचिरहेको थिएँ कि म त्यो अनुभव गर्न चाहन्न। मेरो दिमागमा आएको पहिलो कुरा मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सँधै मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ मेरो कारणले जीवित हुनुहुन्छ। उसलाई के हुन्छ? उनले मेरो जीवनमा मेरो निम्ति गरेका सबै त्यागहरू के हुन्छ? मलाई लाग्यो मेरो जीवन सकियो। केही समय पछि ती व्यक्ति ट्याक्सी लिएर फर्किए। घर पुग्ने बित्तिकै मैले मेरो अर्को साथीलाई फोन गरें जसले मलाई त्यहाँबाट निस्कन भन्यो, उनले मलाई भने कि चोट लागेको व्यक्तिलाई अस्पताल लगियो र तिनीहरू पुलिस स्टेशनमा छन्। कार ड्राइभ गरिरहेको व्यक्ति १ दिन देखि जेल मा पछाडि छ। तब म मेरो परिवारका वकिल संग सम्पर्क गरे र के भयो भनेर उनलाई बताएँ किनभने उनलाई थाहा थियो कि मैले पहिले मेरो आत्मलाई हानि गर्ने कोशिस गरें जब कि मैले ठूलो मानसिक तनावमा रहेको थिएँ, मलाई मेरो सबै सामाजिक मेटाउने सल्लाह दिए मिडिया ह्यान्डल गर्दछ र नपढ्नुहोस् व्यक्तिहरूले मलाई के भन्नु पर्छ। तर मैले सुनेन र सबै घृणा सन्देशहरू र टिप्पणीहरू देखें। मैले दिन र रात रोएँ। तब उनले मलाई सबै नकारात्मक सन्देश टिप्पणीहरू ब्लक गर्न सल्लाह दिए जुन मलाई पठाइएको थियो। र मैले त्यो अनुरूप गरे। जे भयो त्यो यति गलत थियो र भुल्न सक्दैन। म गाडी भित्र बस्न राजी छु भनेर आफैलाई सराप्दै थिएँ। ड्राईभ गरिरहेको व्यक्ति एक आपसी मित्र हो। उहाँ जहिले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुभयो र राम्रोसँग बोल्नुहुन्थ्यो जब म उहाँसँग भेट गर्थें। त्यो रात पनि ऊ राम्रो व्यवहार भएको थियो र हामीलाई ब्रेकफास्टको प्रस्ताव राख्यो। म पहिले नै त्यतिखेर भोकाएको थिएँ त्यसैले मैले खानेकुरामा हो भने। मलाई थाहा थिएन कि हामी यती टाढा जाँदै थोरै मलाई थाहा थियो कि यो घटना हुनेछ। यदि मैले भविष्य जानेको भए म एउटा ट्याक्सीलाई घरमा लगेर सुत्ने थिए जस्तो म सँधै गर्थें। अब तपाईहरु धेरैलाई थाहा छ कि म ठूलो स्वरले संगीत र नृत्य मन पराउँछु, यो मेरो थेरापी थियो। डिप्रेशनको शिकार हुनु सजिलो छैन तर मैले कहिल्यै गुनासो गरेन। प्रत्येक चोटि मैले सोशल मिडिया जाँच गरें मैले आफ्नो जीवनको अन्त गरेको जस्तै महसुस गरें। म फेरि आत्महत्या गर्ने क्रममा थिएँ। यदि मैले कहिल्यै व्यक्तिगत तरीकाले कसैलाई अपमान गरेको छु भने, मेरो साँचो क्षमा। मेरो सम्पूर्ण हृदय र आत्माबाट माफ गर्नुहोस् तर मलाई तपाईंको आफ्नै गलत संस्करणहरू सिर्जना गर्न जब म मौन थिएँ गर्न उत्तम कुरा थिएन। मँ तपाईंको क्रोधलाई ममाथि रोक्न खोज्छु तर झूटा आरोप र चरित्र हत्या मैले स्वीकार गर्न सक्ने कुरा हो। तर म मेरा गल्तीहरू स्वीकार गर्दछु र यसको लागि म पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छु। यदि मैले केहि गलत गरेको छु भने म तपाईहरुसंग माफी चाहन्छु। मलाई थाहा छ तपाईं धेरै मसँग खुशी हुनुहुन्न जब मैले यो घटनाको दुई दिन पछि फेशन शो गरें, मैले पहिले नै मेरो वचन दिएका थिए र अन्तिम क्षणमा मैले समर्थन गरेको कुनै तरिका थिएन। त्यो कारमा चढ्नु एक विकल्प थियो, दृश्य छोड्दा र्र याम्पमा हिंड्नु ठीक थिएन। मैले सिधा अनुहार राखेको हुन सक्छ तर म त्यो खास दिन भित्र मर्न लागिरहेको थिएँ। दुर्घटनामा मैले मेरो बुबा गुमाएँ भन्ने तथ्यले मलाई मेरो जीवन भर दुर्घटनाहरू डराउँथ्यो। त्यसैले म केहि गर्न सक्थें जब म यति विरक्त र शोकित भएँ। प्रत्येक दिन म यस्तो दुःखलाग्दो चीजमा संलग्न भएको छु जुन कहिले पनि हुनु हुँदैन। मैले मेरो पाठ यस्तो डरलाग्दो तरिकामा सिके। र मलाई धेरै व्यक्तिहरू हुन् भनेर थाहा छ जुन बिहान सबेरै एक रात पछि केटीएम शहरको वरिपरि गाडी हाँक्ने गर्थे, कृपया कृपया म तपाईंलाई हागारमा ल्याउँदिन। कोही पनि मेरो स्थितिमा हुन सक्छ। म कुनै पनि जीवन गुमाउन चाहन्न। म अरू कसैको लागि कहिले पनि खराब चाहँदैनथें, म कहिल्यै इन्साफ गर्दिन, म सँधै क्षमाशील थिएँ। र मलाई लाग्छ हामी मानिस भएकोले एक अर्काप्रति बढी क्षमाशील र कम न्यायकर्ता हुनुपर्दछ। के भएको थियो धेरै गलत थियो र यसले मलाई हर चोटि मार्छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, म लीला देवकोटाको आत्मालाई शान्तिमयताका लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु र म उनलाई परिवार र व्यक्तिलाई माफी चाहन्छु जसले उनलाई अत्यन्तै कदर गरे।’